नयाँदिल्ली । सामान्यतया मानिसहरु कुनै आपतकालीन अवस्था वा जरुरतको व्यवस्थापनका लागि बैंकबाट कर्जा लिने गर्दछन् । कतिपय अवस्थामा चाहदा चाहदै पनि केही समयपछि लोनको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ । जसका कारण उनीहरु बैंक डिफल्टमा पर्छन । यसपछि बैंकका लोन रिकभरि एजेन्ट तथा अफिसरहरुले ऋणिलाई बारम्बार फोन गरेर वा म्यासेज पठाएर हैरान...
काठमाण्डौ । ९० वर्ष पुरानो मल्टीनेशन ब्यूटी कम्पनी रेभलान इंक टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । यो कम्पनीले बैंकरप्सीका लागि आवेदन दायर गरेको खबर बाहिरिएको छ । पछिल्लो समय रेभलानले बैंकहरुबाट लिएको कर्जा चुकाउन सकिरहेको थिएन भने सप्लाई चेनको समस्याले कम्पनीको हालत खराब भइसकेको थियो । कोभिड लकडाउनपछि खुलेको बजारमा रेभलानका...
काठमाण्डौ । पाकिस्तान सरकारले घरेलु बजारमा पेट्रोल डिजेलमा दिइरहेको सब्सिडी खारेज गरेसँगै त्यहाँ पेट्रोल/डिजेलको मूल्य रकेटको गतिमा बढेको छ । पाकिस्तान सरकारलेले अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष(आइएमएफ)बाट पैसा पाउनका लागि सब्सिडी खारेज गर्दै इन्धनको मूल्यमा एकैपटक २९ प्रतिशतसम्मको बढोत्तरी गरिदिएको छ । यसले सर्वसाधारणमा थामिनसक्नु...
बैंक अफ इङ्गल्याण्डले लगातार पाँचौपटक बढायो ब्याजदर, अर्को वर्ष मन्दीको खतरा
काठमाण्डौ । बैंक अफ इङ्गल्याण्डले बिहीबार बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ब्याजदरमा लगातार पाँचौं पटक वृद्धिको निर्णय गरेको छ । मौद्रिक नीति समितिले बैंकदरलाई २५ आधार बिन्दुले १.२५ प्रतिशतमा पुर्याउने पक्षमा ६–३ मत दिएको छ भने तीन असहमत सदस्यले ५० आधार बिन्दुले १.५ प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन्...
काठमाण्डौ । अमेरिकामा बैंक ब्याजदर बढेर रेकर्ड स्तरमा पुगेको र विश्वभर आर्थिक मन्दी आउनसक्ने आशङ्काले लगानीकर्ताको मनमस्तिष्कमा घर गरेपछि भारतीय सेयर बजार क्र्यासको बाटोतर्फ उन्मुख बनेको छ । बीएसई सेन्सेक्स तथा एनएसई निफ्टी इण्डेक्स लगातार केही दिनदेखि गिरावटको मार खेपिरहेका छन् । बिहीबार राम्रो सुरुवातको आशा गरिएको थियो,...
प्रतिबन्धबीच तेल बेचेरै रुस मालामाल, चीन र भारतको ठूलो योगदान
काठमाण्डौ। रुस र युक्रेनबीच युद्ध भएको १०० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, युद्ध कहिले टुंगिन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। यो युद्धबीच रुस तेल बेचेरै मालामाल भएको छ। युक्रेनसँग चलिरहेको युद्धको बीचमा रुसले १०० दिनमा जीवाश्म इन्धनको निर्यातबाट ९८ अर्ब डलर कमाएको छ। युरोपेली युनियन (ईयू)ले अधिकांश जीवाश्म इन्धन रुसबाट आयात गर्छ। य...
श्रीलंकामा खाद्यसंकटको त्रास: खेती गर्न कर्मचारीलाई सातामा थप १ दिन बिदा
काठमाण्डौ । श्रीलंकामा खाद्यान्न अभाव हुने डरबीच सरकारले कर्मचारीलाई खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सातामा थप १ दिन छुट्टी दिने भएको छ। श्रीलंकामा सरकारी सेवामा झन्डै १० लाख कर्मचारी छन्। २ करोड २० लाख जनसंख्या भएको श्रीलंकाले विगत ७० वर्षयताको सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका बेला त्यस्तो कदम चाल्न लागिएको...
काठमाण्डौ । फ्रान्सेली कम्पनी टोटल इनर्जिज र भारतीय कम्पनी अडानी न्यु इन्डस्ट्रिज लिमिटेड(एएनआईएल)ले मिलेर विश्वको सबैभन्दा ठूलो ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाउने भएका छन्। यसका लागि फ्रान्सेली कम्पनीले एएनआईएलको २५ प्रतिशत स्वामित्व खरिद गर्ने भएको छ। टोटल इनर्जिज विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल तथा ग्यास उत्पादकमध्ये एक हो। टोटल...
भारतको थोक मुद्रास्फिति १६% नजिक, २४ वर्षअघिको रेकर्ड ब्रेक
काठमाण्डौ । नेपालमा सबैभन्दा बढी सामान आयात हुने छिमेकी मुलुक भारतको थोक महङ्गीमा आधारित मूल्य सूचकाङ्क २४ वर्षकै उच्चस्तरमा पुगेको छ । मे महिनामा थोक मुद्रास्फिति बढेर १५.८८ को उचाईमा पुगेको हो । अप्रीलमा यस्तो दर १५.०८ प्रतिशतमा सीमित थियो । भारतीय न्यूज एजेन्सीहरुका अनुसार यसअघि मार्च महिनामा यस्तो दर १४.५५ प्रतिशत, �...
काठमाण्डौ। भारतलाई सबैभन्दा धेरै तेल बिक्री गर्ने देशको सूचीमा रुस दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। युक्रेनमाथिको आक्रमणपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरुका बाबजुत भारतलाई अधिक तेल बिक्री गर्ने देशको सूचीमा साउदी अरबलाई पछि पार्दै रुस दोस्रो ठूलो देश बनेको हो। भारतलाई सबैभन्दा धेरै तेल बिक्री गर्ने देशको सूचीमा इरान अहिले पनि पहिलो...
बेलायतका कृषि फर्महरुमा कामदारको अभाव, नेपालसहित विभिन्न देशबाट मजदुर भित्र्याउँदै
काठमाण्डौ । बलकुमार खत्री यसअघि आफ्नो जन्मथलो नेपालमै खेती किसानी गर्ने गर्थे। यसका साथै उनी ट्रेकिङ गाइडका रुपमा समेत काम गर्दथे। तर, यो वर्ष २६ वर्षीय खत्री नेपालमा नभई बेलायतको नर्थ नटिङ्घमसायरको पोलिटलेनमा स्ट्रबरी टिप्ने काम गरिरहेका छन्। प्रत्येक वसन्त ऋतुका दौरान हजारौँ विदेशी मौसमी कामदारहरु कृषि फार्मको काम गर्न बेलायत...
अमेजनलाई ठूलो झट्का, फ्युचर ग्रुप मुद्दामा रु. २०० करोड जरिवाना
काठमाण्डौ । भारतको नेसनल कम्पनी ल अपिलेट ट्रिब्युनल (एनसीएलएटी) ले सोमबार अमेरिकी ई–कमर्स कम्पनी अमेजनलाई ठूलो झट्का दिएको छ। एनसीएलएटीले अमेजन–फ्युचर सम्झौताका बारेमा आफ्नो आदेश जारी गरेको हो। एनसीएलएटीले यो मामिलामा अमेरिकी ई–कमर्स कम्पनीलाई ४५ दिनभित्र २०० करोड रुपैयाँ जरिवाना बुझाउन भनेको छ। एनसीएलएटीको आदेशमा यसको...
युक्रेनबाट खाद्यबाली चोरेर बेच्दैछ रुस ?
काठमाण्डौ । रुस र युक्रेनबीच झन्डै ३ महिनादेखि युद्ध चलिरहेको छ। अहिले रुसमाथि युक्रेनको खाद्यबाली चोरेर अन्य देशलाई बेचिरहेको आरोप लागेको छ। कब्जा गरिएको दक्षिणी युक्रेनमा रुसी नियुक्त अधिकारीहरुले पनि रुसले युक्रेनबाट खाद्यबाली अन्य देश पठाएको बताएका छन्। यसअघि युक्रेनी अधिकारीहरुले रुसले युक्रेनबाट ६ लाख टन खाद्यबाली चोरेर...
क्रिप्टोको मूल्यमा निरन्तर गिरावट, बिटक्वाइनको भाउ २८ हजार डलरमुनि झर्यो
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। आइतबार बिटक्वाइनको मूल्य २८ हजार डलरमुनि झरेको छ। आज आइतबार चर्चित क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको मूल्य २७५९५.७० डलरमा सीमित भएको छ। यससँगै बिटक्वाइनको मूल्यमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। आइतबार ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट क्यापको मूल्य...